नेप्से बढ्ने क्रम बुधवार पनि जारी, पहिलो घण्टामा ७.३५ अंक बढेको बजारमा ९० करोडभन्दा बढीको कारोबार
कात्तिक २६, काठमाडौं । यो साता पहिलो कारोबार दिनदेखिनै उकालो लागेको शेयर बजार बुधवार पनि बढीरहेको छ ।
यो दिन पहिलो घण्टाको कारोबार अवधिसम्म ७ दशमलव ३५ अंक बढेर नेप्से परिसूचक १ हजार ६८६ दशमलव १३ विन्दुमा पुगेको हो । पहिलो घण्टामा १७६ ओटा कम्पनीको ८ हजार ५५२ पटकको व्यापारमा रू. ९० करोड ४१ लाख ९७ हजार बराबरको १९ लाख ६३ हजार २५१ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
उक्त अवधिसम्ममा अपि पावर कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । पहिलो घण्टामा उक्त कम्पनीको रू. ८ करोड २ लाख ३७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । उक्त कम्पनीले बुधवारनै चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्ष रू. १० करोडभन्दा बढी नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीको शेयर कारोबार बढेको हो ।
बुधवार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । साल्ट ट्रेड्रि कर्पोरेशनको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ८२ प्रतिशतले शेयरमूल्य बढको हो ।
पहिलो घण्टाको कारोबारमा १२ ओटा समुहमध्ये होटलको १ दशमलव २७ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत र जीवन बीमाको शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समुहको बढेको छ । उक्त अवधिसम्म व्यापारिक समुहको सर्वाधिक ८ दशमलव ९४ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ ।
२०६५.६३ विन्दुमा नेप्से, अपर तामाकोशीको शेयरमूल्य सर्वाधिक वृद्धि (१ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १८]
पहिलो घण्टामा १४.४१ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक (१२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १८]